लमजुङमा तामाङ महोत्सवको रमझम [फोटोहरु]
शब्द/तस्बिर: आश गुरुङ
बेसीसहरमा प्रथम ऐतिहासिक तामाङ साँस्कृतिक महोत्सव सुरु भएको छ । महोत्सवमा सहभागी हुन जिल्लाका ग्रामीण भेग साथै वरपरका जिल्लाबाट तामाङ समुदाय बेसीसहर झरेका छन् ।
माघ ७, २०७३
७ फोटोमा हेर्नुहोस् गुहेश्वरीबाट देखिएको बौद्धनाथ स्तुपा
बिहीबार र शुक्रबार काठमाडौं उपत्यका छर्लङ्ग खुलेको देखियो । सधैं धुलो, धुँवा र तुवाँलोले ढाकिने उपत्यका बिहीबार र शुक्रबार भने सफा देखियो ।
इन्टरपोलका प्रतिनिधिको स्वागतमा झकिझकाउ भक्तपुर
अन्तराष्ट्रिय प्रहरी अपराध संगठन (इन्टरपोल) का प्रतिनिधिलाई भक्तपुर नगरपालिकाले सांस्कृतिक आतिथ्यताका साथ स्वागत गरेको छ । इन्टरपोलको २३ औं एसियन सम्मेलन कै क्रममा ‘गाला डिनर’ का लागि आइपुगेका प्रतिनिधिलाई विश्वसम्पदा सुचीमा सुचिकृत भक्तपुर दरबार स्क्वायर प्रवेशद्धारमा भक्तपुर भक्तपुरको पहिचान झल्किने विभिन्न किसिमका ऐतिहासिक नृत्यहरु सहित भादगाउँले टोपी लगाएर स्वागत गरेको हो ।
कालभैरवको मुखबाट चारो चोर्दै भँगेरा ! [फोटोफिचर]
तस्बिर : अंगद ढकाल, शब्द : अब्दुल्लाह मियाँ
चरा प्रजातीको अध्ययन/अनुसन्धान गर्ने पन्छी संरक्षण संघ (बीसिएन) का अनुसार नेपालमा पाँच प्रजातीका भँगेरा पाइन्छन् ।
कास्कीको उत्तरपूर्वी क्षेत्र अन्नपूर्ण हिमश्रृंखलाको फेदैमा पर्छ सिक्लेस गाउँ । नेपालका गुरुङ गाउँमध्ये यो गाउँ सबैभन्दा ठूलो मानिन्छ । सिक्लेसमा करीब ५ सय घरधुरी एकैठाउँमा छन् । पार्चे गाविसमा पर्ने सिक्लेसमा यस क्षेत्रकै सबैभन्दा ठूलो मेला चलिरहेको छ ।
भूकम्प स्मृति दिवस : यसरी मनाइयाे उपत्यकामा (फोटो फिचर)
आइतबार देशभरि नै १९ औं भूकम्प स्मृति दिवस मनाइँदै छ । यस वर्ष दिवसको नारा ‘भूकम्पपीडितको सुरक्षाको आधार, भुइँचालो थाम्ने घर र पूर्वाधार’ तय गरिएको छ । सरकारले वि.सं. १९९० माघ २ गते महाभूकम्प गएको सम्झनामा केही वर्षयतादेखि भूकम्प स्मृति दिवस मनाउँदै आएको छ ।
हिउँ परेपछि किसानमा हर्ष [फोटो फिचर]
जुम्लामा आइतबार बिहानैदेखि हिमपात भएको छ । यस वर्ष पुसको अन्तिम साताको आइतबार पहिलो पटक हिउँ परेको थियो भने माघको पहिलो साताको आइतबार दोस्रो पटक हिमपात भएको हो ।
माघीमा झुम्यो टुँडिखेल
थारू बस्तीमा आज माघीको रौनक छाएको छ । थारू समुदायको विशेष पर्व भएकाले बिहानैदेखि थारुको बसोबास हुने स्थानहरुमा निकै उत्साह र चहलपहल बढ्छ । काठमाडौंमा बस्ने थारुहरुले भने टुँडिखेलमा जम्मा भएर माघी मनाए ।
सुरु भयो स्वस्थानी ब्रत: फोटोमा हेरौं शाली नदीमा माघ स्नान
पुस शुक्ल पूर्णिमादेखि माघ शुक्ल पूर्णिमासम्म विधिपूर्वक गरिने स्वस्थानी ब्रत आज (बिहीबार) देखि सुरु भएको छ । पुस शुक्ल पूर्णिमादेखि माघ शुक्ल पूर्णिमासम्म एक महिना स्वस्थानी ब्रत र माघ स्नान गरिन्छ ।